Tanànan’i Mexico : Midina An-dalambe Manohitra ny #LeyTelecom Ireo Olom-pirenena · Global Voices teny Malagasy
Lalàna mitanila, tsy manaja ny fiainana manokana sy fahalalahana miteny
Voadika ny 03 Mey 2019 5:09 GMT
Mpanao fihetsiketsehana nivoaka mba hiarovana ny Aterinetom-bahoaka iray manaja ny tsy fitanilàn'ny aterineto sy ny fahalalahana maneho hevitra.
Avy tamin'i Jacobo Nájera sy i Alberto R. León. Amin'ny teny Espaniola avokoa ireo rohy rehetra.
Ny 10 Aprily, ho valin'ny tetikasan-dalànan'ny Filoha Enrique Peña Nieto mikasika ny fifandraisan-davitra dia nidina an-dalambe tao anatin'ny fihetsiketsehana iray tao afovoan'ny tanànan'i Mexico ireo olom-pirenena meksikana. Araka ireo fanadihadian'ny matihanina, hikitika ny fahalalahana maneho hevitra, ny tsy fitanilàn'ny aterineto, ny tsiambaratelo ary ny fidirana amin'ny aterineto ny fandraisana ireo fanovàna natolony. Niarahan'ireo fikambanana sy vondrona maro toy ny AMARC México, Artículo 19, CENCOS, R3D, Centro ProDH, Propuesta Cívica, Libre Internet Para Todos, ary ny ContingenteMX, ankoatra ireo maro hafa ilay fihetsiketsehana izay nomena ny anarana hoe #NoMasPoderAlPoder tety anivon'ny tambajotra sosialy.
Sary an'i Jesús Robles Maloof (CC BY–SA 2.0)
Nanomboka tao amin'ny Televisa Chapultepec, ilay foiben'ny tambajotran'ny fahitalavitra lehibe indrindra any Meksika ilay diabe, ary nankany amin'ny tranoben'ny Antenimieran-doholona, izay hifidianana ireo fiovàna afaka andro vitsy.
Natolotra toy ny ezaka mikendry ny hanafoana ireo ampihimamba Meksikana amin'ny fifandraisandavitra sy ny fampielezampeo, mandrakotra karazana lohahevitra midadasika mikasika ny fifandraisana elektronika ilay lalàna ─ ary manitsaka ny tanin'ny zon'olombelona. Noho ny fangatahan'ireo manampahefana “mahefa”, mamela ireo orinasan'ny fifandraisandavitra ”hanakana, hibahana na hanafoana ireo ”tolotra fifandraisandavitra ” amin'ny fotoana saropady ho an'ny fiarovambahoaka sy nasionaly ilay lalàna. Mamela ireo mpamatsy tolotra Aterineto ihany koa mba hanome tolotra mikambana ”izay mamaly ireo fangatahan'ny tsena” ary hanavaka ny ”fahafaha-manao, hafainganam-pandeha ary kalitao” ilay lalàna – fepetra ahiana hanakana ny fiarovana ny tsy fitanilàn'ny Aterineto ao amin'ny firenena. Fanampin'izany, hamela ireo manampahefana mba hanaraka ny asan'ireo mpampiasa amin'ny fomba mivantana ireo fepetra fiarovana ireo, amin'ny fampiasana ireo fitaovana famantaraa toerana kanefa tsy mahazo alalana mialoha avy amin'ny fitsarana.
Niitatra hatrany amin'ny fanilihana ireo sehatra sosialy osa ao Meksika, toy ilay fiarahamonin'ny vazimba teratany, ary koa ny fiakarambidin'ny tolotra Aterineto ny ahiahin'ny vahoaka. Nasongadina ihany koa fa ny fifandraisandavitra dia toerana famoronana, fampielezana ary fanoherana, ary amin'ny fanekena ireo fanavaozana ilay lalàna, hopetahana laharana ao anatiin'ny lalàna nasionaly ireo endri-pamoretana atao amin'ireo mpikatroka, fikambanana sy olon-tsotra.
Sary an'i Jesús Robles Maloof (CC BY-NC-SA 2.0)
Nanazava tsara i Daniel Gershenson, mpiaro ny zon'ny mpanjifa, hoe efa ho herintaona mahery izay, natolotra teo anoloan'ny Antenimeran-doholona ny hetsika santatra iray nikendry ny hamorona tambajotran-tserasera ho an'ny vahoaka tany Meksika. ”Raha toa ka manararaotra ny fotodrafitrasa efa misy izy ireo,” hoy i Gershenson tamin'ny Global Voices, ”Mety ho afaka omena ny mponina rehetra ao an-tanàna ny Aterineto. Na izany aza, tsy mbola noraharahian'ny mpanao lalàna hatramin'izao ity hetsika santatra ity, izay niezaka ny hametraka haingana ilay fanovàna #LeyTelecom.”
Nasongadin'ny mpikatroka Bosque Iglesias Guzman fa ampahan'ny endrik'ilay olana atolotry ny #LeyTelecom fotsiny ilay fanarahamaso ny Aterineto, amin'ny fanizingizinana ny fahatapahan'ny ‘analogique’ tamin'ny 2015, rehefa ho lasa niomerika avokoa ireo onja fahitalavitra rehetra. Ho an'i Bosque, mitarika fanarahamaso misimisy kokoa ny ampihimamban'ny fahitalavitra izay efa ngezabe ao Meksika izany.
Tamin'ny alalan'ny Ministeran'ny Raharaha Ivelany, nanaiky ny fanambaran'ny Firenena Mikambana mikaska ny Zo amin'ny Tsiambaratelo ao anatin'izao Vanim-potoanan'ny Niomerika izao tamin'ny faran'ny taona 2013 ny governemanta Meksikana. Notohanan’ i Meksika ihany koa ny fanapahankevtry ny OAS momba ireo rindrambaiko fanarahamaso sy ny fiantraikan'izy ireo eo amin'ny fahalalahana maneho hevitra, izay nanaiky ny zo hanana tsiambaratelo sy fahalalahana maneho hevitra – fotokevitra tena nodikaina tao anatin'ilay volavolan-dalàna faharoa tamin'ny Fanavaozana ny Fifandraisandavitra– ho toy ny zava-dehibe ho an'ny fiarahamonina demokratika.
Niara-niasa tamin'ireo mpiaro ny zon'olombelona manerantany sy ireo matihanina amin'ny teknolojia misokatra ny Global Voices Advox mba hiantsoana fakàna hevitry ny daholobe mikasika ireo fanavaozana ilay lalàna momba ny fifandraisandavitra mialohan'ny hametrahana azy ireo hofidiana. Vakio eto ilay taratasy amin'ny teny Espaniola ary eto amin'ny teny Anglisy.